OnePlus 9 Pro wuxuu ka muuqanayaa sawirro dhab ah ka hor intaan la bilaabin | Androidsis
Waxaa jiray xan badan oo ku saabsan astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee xiga OnePlus 9. Qaar badan oo ka mid ah xogaha aan ka helnay taleefannadan ayaa waxaa ka mid ah kuwa ugu fiican uguna horumarsan, sidee bay noqon kartaa haddii kale. Si kastaba ha noqotee, warbixinnada qaar ayaa is burinaya, taas oo ka dhigeysa waxyaabo badan oo mala awaal ah. Waxaana mudan in maskaxda lagu hayo in wali uusan jirin ogeysiis rasmi ah oo ku saabsan mobiladaan, sidaa darteed wax walboo ansax bay noqon karaan ama maya.
Sidoo kale, inkasta oo aynaan wax uun hubaal ku qaadan karin xilligan, kan cusub ee hadda ka dillaacay OnePlus 9 Pro waxay nagu dhiirrigelineysaa inaan sidaas yeelno, maadaama qaar sawirro dhab ah oo moodal wanaagsan leh ay u muuqdeen kuwo tilmaamaya dhowr ka mid ah astaamaheeda, muuqaalka iyo xaqiiqda xiisaha leh ee ku saabsan ururka ay soo saaraha taleefannada casriga ahi la sameeyeen Hasselblad hirgelinta nidaamka sawir qaadista ee mobilka
Tani waa muuqaalka suurtagalka ah ee OnePlus 9 Pro
Burburka kan aan markan siinayno dhibcaha sawirada laga soo duubay fiidiyowga soo socda waa youtuber Dave Lee, oo isagu, sida uu isagu iska leeyahay, la wadaagay sawirrada isticmaalaha Discord.
Wax yar kama filan karno OnePlus 9 Pro. Qalabkan, oo ku saleysan waxa caarada ayaa ka muuqda fiidiyowga, waxay la imaan laheyd shaashad qalooca taas oo, si loogu xareeyo kaamerada iswada ee ay ku faani doonto, waxay yeelan doontaa dalool la qoday, halka, nidaamka sawir qaadista dambe, ay ka muuqan doonto muraayad qalooca oo gadaal ah oo ay ku jiraan afar kamaradood.
Kaamirooyinka gadaal waxaa ka mid ah labo dareemayaal waaweyn, midna kan kale, iyo labo yar yar oo midba midka kale ka xigo. Guryaha kamaraduhu waxay sidoo kale ku yaalliin iftiinka LED-ka, nidaamka xoogga saaraya laser-ka, iyo dalool yar oo leh giraan la rumeysan yahay inuu makarafoon ku dhex jiro. Sawirada ayaa xaqiijinaya taas OnePlus 9 Pro xaqiiqdii kama soo muuqan doono muraayad kamarad periscope ah maadaama dareemayaasha oo dhami ay wareegayaan, inkasta oo tan ay tahay inaan gadaal ka xaqiijino.
Sawirradu sidoo kale waxay muujinayaan in OnePlus 9 Pro uu leeyahay dekedda USB-C xagga hoose oo ay dhinac yaalliin santuuqa SIM-ga iyo afhayeenka labada dhinacba. Sidoo kale, waxaan ogaan karnaa in taleefanka casriga ah ee darajadiisu sarrayso uu leeyahay qaab wareegsan oo ku wareegsan badhanka slider Alert Slider iyo badhanka awoodda ee dhinaca midig.
Marka loo eego astaamaha qaarkood iyo tilmaamaha farsamo ee lagu arkay ciqaab la'aan, qaabeynta shaashadda waxay muujineysaa in OnePlus 9 Pro uu leeyahay guddi leh QuadHD + xallinta 3.120 x 1.440 pixels. Iyada oo loo marayo dejinta mobilada, dadka isticmaala waxay awood u yeelan doonaan inay doortaan inay dejinayaan shaashadda shaashadda QHD + ama FHD + (2340 x 1080 pixels) ama ay taleefanka si toos ah ugu beddelaan xallinta ku habboon si loo badbaadiyo nolosha batteriga. Taa baddalkeeda, heerka ugu sarreysa ee uqalmidda waa 120 Hz; tan waxaa lagu beddeli karaa midda 60 Hz, taas oo sidoo kale loo isticmaali karo.
Ugu dambeyntiina, qaybta Ku saabsan telefoonka, taas oo ah tan inta badan ku jirta xogta qaar ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee qalabka, waxay muujineysaa OnePlus 6T halkii ay ka matali laheyd OnePlus 9 Pro, oo ah mid aad u xiiso badan. Tan waxaa usii dheer, nama ogeysiinaayo processor-ka, qeexida kamarada iyo qeexida shaashadda isku mid ah.
Xaqiiqda kale ee xiisaha leh - iyo waliba sida layaabka leh - ayaa ah in xasuusta RAM lagu sheegay inay tahay 11 GB (tani waxay ku imaan laheyd qalad) iyo in keydka gudaha ee casriga ah uu yahay 256 GB oo keyd ah. Midda dambe waxaan ku qiyaaseynaa inaysan noqon doonin wax la ballaarin karo, sidaa darteed ma lahaan karto booska kaarka microSD; mobilada waxaa lagu bilaabi lahaa IP68 heerka caabbinta biyaha.
Waxaan rajeyneynaa in terminaalka uu sidoo kale la imaan doono Snapdragon 888, Barmaamijka moobiilka ugu awooda badan Qualcomm maanta. Si kastaba ha noqotee, dhammaan wixii la sheegay waa in mar dambe la xaqiijiyaa soo-saaraha, taas oo dhowaan noqon doonta, tan iyo markii la bilaabay taxanaha OnePlus 9 ayaa la filayaa in la fuliyo mararka qaarkood bisha Maarso, tanna wax yar ayaa ka dhiman.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Tani waa sida OnePlus 9 Pro uu ugu muuqdo sawirro dhab ah: qaabeyntiisa iyo kaamirooyinka ay adeegsan doonto waa la sifeeyey [+ Video]
Kuwani waa taleefannada ugu waxqabadka fiican maanta